Football Khabar » बुन्डेसलिगामा आज उपाधिको छिनोफानो हुँदै, डर्टमुन्डलाई भाग्यको आश !
बुन्डेसलिगामा आज उपाधिको छिनोफानो हुँदै, डर्टमुन्डलाई भाग्यको आश !
जर्मन लिग बुन्डेसलिगामा आज जारी सिजनको उपाधिको छिनोफानो हुँदैछ । लिगको अन्तिम खेल बाँकी भएका बेला साबिक विजेता बार्यन म्युनिख र दोस्रो स्थानको बोरुसिया डर्टमुन्ड आज आ–आफ्नो खेल खेल्दैछन् ।
आज यी दुवै टिम अन्तिम खेलबाट उपाधि पोल्टामा पार्ने दाउमा छन् । हाल अंक तालिकामा बार्यन ३३ खेलपछि ७५ अंक बनाएर शीर्ष स्थानमा छ । दोस्रो स्थानको डर्टमुन्डको खातामा ७३ अंक छ ।
यस्तो अवस्थामा आज डर्टमुन्ड उपाधिका लागि भाग्यको आशामा छ भने बार्यन केही सहज अवस्थामा छ । हाल दोस्रो स्थानको डर्टमुन्डभन्दा २ अंकले अघि रहेको बार्यन आजको खेलमा नहारे उसले उपाधि जित्छ । अर्थात्, आज उसलाई कम्तीमा बराबरी भए पनि उपाधि जित्न पुग्छ ।
तर, डर्टमुन्डले भने आफ्नो खेल जितेर मात्रै पुगदैन, शीर्ष स्थानको बार्यन आफ्नो खेलमा पराजित हुनुपर्छ । यदि बार्यन पराजित भयो र डर्टमुन्डले आफ्नो खेल जित्यो भने उसले साबिक विजेतालाई १ अंकले पछि पार्दै उपाधि जित्नेछ ।
आज अन्तिम खेलमा बार्यनले फ्रान्कफुर्टसँग राति ७ः१५ बजेबाट आफ्नो घरमा खेल्दैछ । उता, दोस्रो स्थानको डर्टमुन्डले ७ः१५ बजेबाटै मोन्चेङ्लाबाचसँग खेल्दैछ ।
उपाधि होड रोमाञ्चक मोडमा रहेकाले आज यी दुवै टोली दबाबमा हुनेछन् । बार्यन आज आफ्नो खेल जितेर लिग च्याम्पियन बन्ने दाउमा छ भने डर्टमुन्ड भने आफ्नो खेल जितेर बार्यनको हारको प्रतीक्षामा हुनेछ ।
प्रकाशित मिति ४ जेष्ठ २०७६, शनिबार ०५:४५